Pablo naVirginia, naMarcel Mithois. Ongororo pfupi | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 24/09/2021 12:00 | Mabhuku, Novela, Nyaya
Kune mabhuku aunodzokera kwawo uye ndinoita izvi pese pandinodzoka kumba, Pablo naVirginia, ivo Marcel Mithois. Iyo ndeimwe yemabhuku iwayo ayo, kwenguva, zera kana kubatana kwakasarudzika, anoramba akanyorwa pa zvinyorwa zvakakosha ndangariro uye unofanira kuaverenga nguva nenguva. Kuenderera mberi uchizvisimbisa iwe mune iwo maficha uye kunakirwa, izvo zvakare zvakakosha. Nhasi ndiri kutaura nezvake.
2 Pablo, Virginia neni
3 Muchato weParis
Mutori wenhau, munyori wenhau, munyori wemitambo uye munyori wezvinyorwa French, akaberekwa muna Chikumi 15, 1922 muPort Saïd (Egypt) ndokufira muParis muna2012. Munyori wemabasa akati wandei akabudirira naJacqueline Maillan sa Croque-monsieur y Kupisa kwezuva, aive zvakare munyori wechiratidziro yeterevhizheni Les Quatre Masenti Coups de Virginie, yakashandurwa kubva mukoramu yake muvhiki France Mazuva.
Panguva imwecheteyo vakamupawo a inosetsa chikamu chii chaive Pablo naVirginia, uye chii chaiva kubudirira kukuru. Akanyora anopfuura mazana maviri emakore mana pasina kukanganiswa uye zvakare akaburitsa bhuku aine sarudzo yemamwe acho. Ivo vakatogadzira iyo TV dzino iyo yakagadziridzwawo pano uye yaigona kuonekwa mu TVE muna 1968. Vakaita nyeredzi mariri Carlos Mendy saPablo uye Conchita Montes saVirginia.
Pablo, Virginia neni
Nyaya dzaPablo naVirginia, muchato weParis usina vana, ndeye Chronicle yenguva yake - makumi matanhatu - zvese zvemagariro uye nemanzwiro, inoratidzwa kuburikidza nezviitiko zvake uye zvisirizvo. Us Pablo anovaudza mumunhu wekutanga uye ese ari kutaurwa kana kuverengerwa Virginia, mukadzi ane hunhu hwakakosha, asingafarire uye dzimwe nguva asina chaanoziva asi anogara achiseka.
Ndakauya kwavari pandakavawana rimwe zuva mumakore makumi masere ekuyaruka pasherefu mune imwe kamuri yatete vangu vari munyika. Iyo butiro rakaita kuti ndinhonge bhuku racho kamwechete ndokuritarisa. Ipapo ndakazoona kuti ndizvo chipo kubva kuna amai vangu kuna baba vangu, iyo yakanyoreswa kuCírculo de Lectores. Nyaya yacho yakabva muna 1964. Uye ndakaenda nayo kumba.
Hazvina kumbonditorera nguva kuti ndiverenge uye zvaive zvakadaro imwe yedzidziso dzangu dzekutanga nekuda kwekuravira kwangu kwekuverenga nekunyora pamwe munhurume anorondedzera izwi.
Nemaziso anhasi Pablo naVirginia Hazvimiri kuva kuverenga sekusaziva sezvo kuchishaya kwekunyepedzera pane kuvaraidza nekusetsa kunoenderana neakapesana zvachose mavara eva protagonists uye akawanda asinganzwisisike kana asina kujairika mamiriro avari kuita.
La kudzikama, kuyerwa uye kunzwisisa anoisa Pablo, akapusa uye akanyarara mushandi wemuhofisi, akaroora Virginia, amai vemba, uye vanomuda zvakanyanya. Iye anotiudza, neakawanda phlegm asi zvakare rudo, unyoro uye kusagadzikana, Zvikamu zvinomutamba, iyo inopesana, kushinga, kusagadzikana uye dzimwe nguva vasingazivi, asi nguva dzose kutsunga kuita chimwe chinhu kana kuita zvakanaka. Chinokosha pakati pezviviri pane iyo kuzvidzora pamwe chete kune izvo kushaya simba kana hurema.
Saka, 25 yakasarudzika adventures izvo zviri mubhuku uye zvinotaurwa muzvitsauko zvipfupi zvichibva pakushanduka kwayo kusvika dzidza kutyaira kana kushambira -aviri eanonakidza- kusvika kuronga mapato yevana veshamwari kana nenjodzi mitambo yemakadhi, make of mwana wehanzvadzi uine vamwe vana vasingagone kana kuchengeta imbwa hombe (iyo isiri) yeimwe shamwari. Asi iye zvakare anoomerera pane Dzidza kutamba classical kutamba kana kumonyanisa, nyora bhuku uye tamba gorofu, iyo inoshuma nhevedzano yemamiriro ezvinhu anoshamisa uye anonakidza kupfuura izvo Virginia anoedza kugadzirisa nenzira yakanakisa kana yakamunakira.
Kune zvekare zvimwe zvitsauko zvakaiswa mukati zororo kufamba kana neshamwari, senge nzendo mbiri dzegungwa dzizere nezvisingafungidzike nekusanzwisisana, vachienda kumunda nevamwe vaviri vevaviri vari vaviri tandem kana a zvinosetsa dhadha kuvhima mune imwe yeiyo Virginia kuyedza kumira mushe.
Una kupfuura kuverenga kwakareruka uye kwoushamwari izvo zvinongogoneka chete pamwe mu zvitoro zvemabhuku zvine tsika kana rwechipiri uye rwechitatu ruoko mune zvinyorwa zvinyorwa zveInternet.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Pablo naVirginia, naMarcel Mithois. Pfupiso rondedzera
Nieves Munoz. Kubvunzana nemunyori weThe Silenced Battles